Mandona tapany mba ho voa erany… | NewsMada
Fiteny hoe dony tapany, handoa erany. Tsy inona fa tetika sy fomba hahazoan-tombony amin’ny fifampiraharahana amin’ny hafa. Tsy hoe samy mahazo izany, fa mikendry tombony avo roa heny amin’izay lany sy atao.
Amin’izao raharaham-pirenena izao: mby aiza izay amin’ny fifandraisana amin’ny vahiny izay? Eny, na tamin’ny fitondrana nifandimby aza… Tsy mahafa-bela ny fiankinan-doha amin’ny any ivelany: trosa, fanampiana…
Avy any ivelany ny 70 % amin’ny vola ampiasain’ny fanjakana amin’ny fampandrosoana? Farany teo, nampitaraina, ohatra, ny tsy fisian’ny fanampiana ho an’ny kaominina hanadiovana tanàna iadiana amin’ny pesta.
Tsy misy izay fiovana, na teo aza ny fampanantenana fanovana. Ny tsikaritry ny mpanara-maso sy ny mpandinika sasany aza, miharatsy lavitra noho ny teo aloha ny fiseho sy fandehan’ny raharaha ankapobeny.
Manjakazaka, ohatra, ny vahiny sasany amin’ny fitrandrahana harena an-kibon’ny tany. Mitondra faisana ny vahoaka ifotony, potika ny tontolo iainana, very ny harena… Miaraka amin’izany ny ady sy fandrobana tany.
Eo koa, ohatra, ny fahavoazana amin’ny harena an-dranomasina: misy firenen-dehibe tena mitavana, manararaotra… Amin’izany, manamarin-tena ny mpitondra fa ankatoavin’ny sehatra iraisam-pirenena, tsara ny fifandraisana.
Minia mikimpy sa tsy mahita? Na jamban’ny dona tapany, andoavana erany… Tsy ny tena tsinona mandona tapany, mahazo erany; fa voadona tapany, mandoa erany: harem-pirenena gaboraraka, vahiny manjakazaka…
Inona no iresahana izany eto? Ho avy ny fifidianana, efa misy ny fivarotan-tena sy fivarotan-tanindrazana atsy sy aroa. Mandona tapany mba ho voa erany? Izany izao mampahantra vahoaka izao, mahafadiranovana ny firenena.
Dieny izao, mila mandinika lalina sy mijery lavitra amin’izay ny vahoaka? Na amin’izay re sy atao izany, na amin’izay miteny sy manao… Iza no tena miady sy mitady ny tombontsoam-bahoaka sy tia tanindrazana?